စစ်အုပ်စု၏ ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင် ဆိုးဝါးနိမ့်ကျနေသော တအာင်းဒေသရှိ ပညာရေးစနစ်အပေါ်ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်	Posted on April 20, 2010	by bmta05 တအာင်းလူငယ်များ၏ ယနေ့ထုတ်ပြန်သည့် အလင်းမဲ့ ဘဝ ပညာရေးအစီရင်ခံစာသည် စစ်အုပ်စု၏ ထိန်းချူပ်မှု အောက် ဆိုးဝါးနိမ့်ကျနေသော ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရှိ တအာင်းလူမျိုးတို့ ပညာရေးစနစ်အကြောင်းကို အများ ပြည်သူသိရှိစေရန် ထုတ်ဖော်ထားပါသည်။ ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း နမ့်ဆန်၊ နမ့်ခမ်းနှင့် မန်တုံ စသည့် မြို့နယ် သုံးမြို့နယ်မှ ရွာပေါင်း ၆၁ ရွာတွင် လူဦးရေ ၁၇၅ ဦးတို့ကို တွေ့ဆုံ မေးမြန်းမှူအပေါ် အခြေခံပြီး အချက်အလက်များ ကောက်ယူခဲ့ပါသည်။
This entry was posted in ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်, Burmese pages only. Bookmark the permalink.	← Lightless Life(Educational Publication Report)